ကလေးငယ်ကလေး လမ်းလျှောက်သင်နေသည်ကို ဖခင်ဖြစ်သူသည် လှေကားထိပ်မှ ထိုင်ကြည့်နေလေ၏ ကလေးငယ်ကလေးသည် ထိုလှေကားထစ်များကို တစ်ထစ်ချင်း လှမ်းတက်သော်လည်း အောင်မြင်မှုမရသဖြင့် စိတ်ပျက်သွားသည်. . . တခြားအတွေးများလည်းပေါ်လာ၏
သို့နှင့် လှေကားအောက်ဆုံးတွင် ထိုင်နေလိုက်သည်. . လှေကားပေါ်သို့ တက်၍မရသဖြင့် စိတ်ပျက်အားငယ်လျက်ရှိသည်. . . "တော်ပါပြီ" ဟုဆိုကာ တခြားတစ်နေရာသို့ ထွက်သွားလေသည်. . သို့သော်ဖခင်ဖြစ်သူကမူ သူ၏ သားငယ် လှေကားပေါ်သို့ ကြိုးစားတက်သည်ကို တွေ့ချင်မြင်ချင်လျက် ပင်ရှိနေသည်.
ဤနေရာတွင်ဖြစ်သင့်သည်မှာ ဤသို့ဖြစ်သည်. . ကလေးငယ်က စွမ်းအားနည်းနေသော်လည်း စိတ်ဆန္ဒကရှိနေသည်. . . ထိုအခါ ဖခင်ဖြစ်သူက လှေကားပေါ်မှဆင်းလာ၍ သားငယ်ကို ကောက်ယူပွေ့ချီပြီး လှေကားထိပ်သို့ ခေါ်သွားသင့်ပေသည်. .
ထိုနည်းတစ်နည်းသာရှိပေသည်. . .
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀တွင်လည်း ကြိုးစား၍ ပထမဆုံးခြေလှမ်းကို စတင်ချသည့်အခါ နာကျင်မှုများ၊ ယိမ်းယိုင်မှုများရှိမည်ဖြစ်သည် . . ထိုအခါမျိုးတွင် ဖခင်ဖြစ်သူ (သို့) ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း နှင့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ က လှေကားထိပ်သို့ရောက်အောင် ကူညီခေါ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်. . .
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, May 28, 2009
kokomaung.uk May 28, 2009 at 8:59 PM
လူတိုင်းမှာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ဖေးမချင်တဲ့စိတ်ရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။
ညခင်း May 29, 2009 at 12:01 AM
အကူအညီ လိုရင်ခေါ်လိုက်နော်...May I help U... ဟီး။
mgnge May 29, 2009 at 12:44 AM
လူတိုင်းလူုတိုင်း... တစ်ယောက်အကျိုး တစ်ယောက် သယ် ပိုးပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေ့ါ...။
စာကြည့်တိုက်ရဲ့ စာလေးတွေ ကိုအားပေးလျက်ပါဗျာ..။
zox.netmaze May 29, 2009 at 1:38 AM
အေးဗျ... ကိုယ့်အနားမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်။ ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ ကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်စေတယ်ပေါ့။ အင်း ... မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ . . . .
မှန်ပါပေတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့ သိပ်မသေချာဘူး ဖခင်ကတော့ သေချာတယ် လှေကားပေါ်ချီခေါ်သွားမှာ
မိုးခါး May 29, 2009 at 8:05 AM
တနည်းနည်းနဲ့တော့ အားပေးပြီး ဆွဲတင်သင့်တယ် ..